Ahoana no Fiheveran’ny Baiboly ny Halloween? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Galoà Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Koreanina Kroaty Kyangonde Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Ossète Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Tsy miresaka momba ny Halloween ny Baiboly. Rehefa jerena anefa ny niandohan’io fety io sy ny fombafomba ataon’ny olona mankalaza azy io ankehitriny, dia hita fa miorina amin’ny fampianaran-diso momba ny maty sy ny fanahy tsy hita maso na demonia izy io.—Jereo ilay hoe “Ny tantaran’ny Halloween sy ny fombafomba atao amin’izy io.”
Mampitandrina ny Baiboly hoe: “Aoka tsy hisy eo aminao ny ... olona manontany amin’ny maty.” (Deoteronomia 18:10-12) Misy mihevitra fa tsy mampaninona ny manao Halloween. Resahin’ny Baiboly anefa fa tsy mety ny fombafomba atao amin’izy io. Hoy ny 1 Korintianina 10:20, 21: “Tsy tiako hanan-javatra iombonana amin’ny demonia ianareo. Tsy afaka ny hisotro amin’ny kaopin’i Jehovah sy ny kaopin’ny demonia ianareo.”
Ny tantaran’ny Halloween sy ny fombafomba atao amin’izy io
Samain: “Fety fanaon’ny Selta, mpanompo sampy fahiny” ny Samain, ary “nankalazaina tokony ho 2 000 taona mahery lasa izay”, hoy ilay hoe The World Book Encyclopedia. Avy amin’io fety io ny Halloween. “Mino ny Selta fa afaka mandehandeha miaraka amin’ny velona ny maty rehefa Samain, ary afaka mitsidika ny maty sy miaraka amin’izy ireo ny velona.” Ampianarin’ny Baiboly mazava tsara anefa fa “tsy mahalala na inona na inona” ny maty. (Mpitoriteny 9:5) Noho izany, dia tsy afaka mifandray amin’ny velona izy ireo.
Akanjo, vatomamy, ary fanomezana na sangy ratsy amin’ny Halloween: Milaza ny boky Halloween—An American Holiday, An American History fa nanao akanjo mampahatahotra ny Selta sasany. Amin’izay, hono, izy ireo tsy ampijalin’ireo fanahy mandehandeha satria heveriny fa namany. Ny hafa indray nanome vatomamy an’ireo fanahy mba hampitonena azy ireo. Narahin’ny mpitondra fivavahana katolika tany Eoropa tamin’ny Moyen Âge (taona 500-1500 tany ho any) ny fombafomban’ny mpanompo sampy, ka nampirisihiny hanao akanjo mampahatahotra ny mpivavaka tao aminy ary nasainy nitety trano mba hangataka fanomezana kely. Raran’ny Baiboly anefa ny mampifangaro ny fombafomban’ny fivavahan-diso amin’ny fanompoana an’Andriamanitra.—2 Korintianina 6:17.
Matoatoa, vampira, mpamosavy, ary lolovokatra: Nampifandraisina tamin’ny fanahy ratsy foana izy ireo hatramin’izay. (Halloween Trivia) Resahin’ny Baiboly mazava tsara fa tokony hanohitra ny fanahy ratsy isika, fa tsy hanao fety miaraka amin’izy ireo.—Efesianina 6:12.
Voatavo na harendrina voatavo ampiasaina amin’ny Halloween: “Nitety trano ny mpivavaka” tany Grande-Bretagne, tamin’ny Moyen Âge, ary “nangataka sakafo ho takalon’ny vavaka nataony ho an’ny maty.” Nitondra “harendrina vita tamin’ny nave” izy ireo, “ka ny labozia tao anatiny dia manondro fanahy ao amin’ny afofandiovana.” (Halloween—From Pagan Ritual to Party Night) Misy milaza fa natao handroahana fanahy ratsy ny harendrina. Nosoloan’ny olona tany Amerika Avaratra voatavo ny nave tamin’ny taona 1800 tany ho any. Be voatavo mantsy tany sady mora ny nanala ny tao anatiny sy nanao sarisary teo aminy. Io fombafomba io dia miorina amin’ny finoana fa tsy mety maty ny fanahy, misy ny afofandiovana, ary azo atao ny mivavaka ho an’ny maty. Tsy mifanaraka amin’ny Baiboly anefa izany.—Salamo 146:4.
Fantaro ny niandohan’ny Halloween sy ireo fety mitovitovy amin’izy io.